समयमै जागरुक भइएन भने सबै गुमाउने छौं– वीपी तिमिल्सेना « Anumodan National Daily
ग्रीन पार्टी नेपाल, नयाँ खालको पार्टी हो । ग्रीन पार्टी नेपालले भोटको राजनीति भन्दा पनि नेपालको हरियाली, जडिबुटी लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि अभियान चलाईरहेको छ । यो पार्टीको नारा छ– प्राकृतिक स्रोत साधन र स्वस्थ हुन हामीबाट सिक्नुस्, भोट जता हाले पनि हुन्छ । तिमिल्सिना काठमाडौंमा रहेको चर्चित पाथिभरा आयुर्वेद अस्पतालका चिकित्सक पनि हुन् । यसपाली अनुमोदनले ग्रीन पार्टीका नेपालका अध्यक्ष विपि तिमिल्सेनासंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, ग्रीन पार्टी र नेपालको जडीबुटी, खनिज लगायतका विषयमा उहाँसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
ग्रीन पार्टीले यो पछिल्लो तीन वटा चुनावमा कस्तो मत परिणाम प्राप्त गर्‍यो ?
पछिल्ला चुनावमा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू आम जनतामाझ जस्ताको त्यस्तै पुर्‍याउन सकेनौ । यो हाम्रो गल्ती हो । अर्काे कुरा हामीले जनताले जे सुनायौ, उहाँहरूले हाम्रो कुरा मात्रै सुने, बुझेनन् र आत्मसात गर्न सकेनन् । प्राकृतिक जीवनशैली र पूर्वजहरूले संस्थागत गरेको विज्ञानलाई आम नागरिकमाझ सहज रूपले पुग्न गाह्रो छैन । त्यसका लागि विभिन्न तालिम लगातका कार्यक्रम भएका छन् । ठूलो टिम छ । विभिन्न जिल्लामा समितिहरू गठन भएका छन् । तर पनि हाम्रा कुरा आम नागरिकले बुझेको देखिएन । त्यसैले चुनावमा हाम्रो राम्रो परिणाम आएन । तर, अहिले परिणामको महत्त्व छैन । र हामी परिणामका कारण मात्रै पछि हट्ने पनि छैनौं ।
त्यसो भए यो पार्टी कहिले राष्ट्रिय पार्टी बन्ला त ?
हामी निरन्तर आफ्नो यात्रामा हिँडिरहेका छौं । यो यात्रा रोकिने छैन । प्राकृतिक जीवनशैली र पूर्वजहरूले संस्थागत गरेको विज्ञान, वर्षोदेखिको आयुर्वेद विज्ञानलाई कसैले पनि नकार्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरी नै कतै पनि आयुर्वेद विज्ञानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तथा यसको विरुद्ध जान सक्ने कोही छैन । सबै प्राकृतिक चिकित्सामा नै फर्किने अवस्था आउँछ । हामीले अव्यवस्थित भएको आयुर्वेद तथा जडिबुटीको व्यवस्थापन गरेर यसलाई आर्थिक रूपमा क्रान्तिसंग जोड्छौं, त्यसपछि यो स्वत: अगाडि बढ्छ । हामी धैर्यपूर्वक प्रतिक्षामा छौं । तर, हामीहरूलाई यो समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन किनभने यो नयाँ होइन । शैली पुरानै हो, तरिका मात्रै नयाँ गरेर जान खोजेको हामीहरूले । हामी शैलीगत रूपमा गए निश्चय नै लक्ष्यमा पुग्छौं ।
एउटा टायर बाल्ने ठाउँबाट दुई किलोमिटर वरिपरिका बालबालिकालाई ब्लड क्यान्सर हुन्छ । मानिसलाई फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ । त्यसबाट डाइएक्जिन ग्यास उत्पादन हुन्छ, जुन बोसोमा बस्छ । र, विस्तारै हामीलाई मुटुको रोग लाग्छ ।
सरकारमा कहिलेसम्म पुग्ने सोच्नु भएको छ त ?
हामीले अहिले नै सरकारमा पुग्ने सोच बनाएका छैनौ । अहिले सरकारले आम नागरिकलाई सहयोग होइन, दु:ख दिइरहेको छ । सीमा सुरक्षा कमजोर छ । जनतालाई हतकडी लगाएको देख्दा, युवा पुस्तालाई विदेश पठाइरहेका देख्दा, अविकास देख्दा अथवा जुन ठाउँमा पुग्नै चारपाँच दिन बढि समय लाग्छ, त्यस ठाउँलाई नगरपालिका घोषणा गरेर कर मात्रै असुल्ने काम गरिरहेको देख्दा सरकार नै बिरामी छ कि जस्तो लाग्छ । सरकारले अप्राकृतिक निर्णय गरिरहेको छ । यसलाई हामीले प्राकृतिक, व्यवस्थित, संस्थागत गर्ने योजनामा छौं । त्यसपछि जनताले विश्वास गरे हामी पनि सरकारमा पुगौला ।
ग्रीन पार्टी दलको नामले के संकेत गर्छ ?
यो नेपालको प्रकृतिप्रेमी पार्टी हो । नेपालमा भएको खनिज, जडीबुटीलगायतका साधनस्रोतलाई परिचालन गर्ने र उच्चस्तरको गुणस्तर बनाउने र विदेशीको हातबाट खनिज र जडीवुटी बचाउने प्रयास गरिरहेका छौ ।
अहिले नेपालको जडीबुटी विदेशमा निर्यात भइरहेको छ, यो फाइदा हो कि बेफाइदा ?
हाम्रो जडीबुटी सिधैं विदेश जानु बेफाइदा हो । यहाँ आयुर्वेदिक कम्पनीहरूले काम गर्न खोजे पनि सरकारले कानुनी बाधा अड्चन देखाएर राम्ररी सञ्चालन हुन दिइरहेका छैन । तर, विदेशी कम्पनीहरूले सजिलै कम्पनी खोल्न पाइरहेका छन् । यसरी नेपालका जडीबुटी सोझै बाहिर गइरहेको राम्रो होइन । औषधि बनेपछि बाहिर जानु उपयुक्त हुन्छ । अन्य देशले आफैले औषधि निर्यात गर्छन, तर नेपाल आफै बिरामी, तनावग्रस्त, अमर्यादित भएको जस्तो भएको छ र अरूलाई आफ्नो जडीबुटी दिइरहेको छ । जडीबुटीले नेपालको आर्थिक तन्त्रलाई सुधार गर्न सक्छ । सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै हामीले नेपालमा रहेको खनिज, जडीबुटी, स्रोतसाधन देखेका छौं । अन्य देशको अन्तरिक आयबाट देख चल्छ भने हाम्रो देशको किन चल्दैन ? अहिले चीनमा औद्योगीकरणका कारण त्यहाँको औषधिले काम गरेनन् । युरोपियन देशका पनि कम्पनीका मान्छेहरू पनि जडीबुटीका लागि नेपाल आइरहेका छन् । त्यस्तै, नेपालकै कतिपय जडीबुटीले अमेरिकामा पनि औषधि उत्पादन भइरहेको छ । यसकारणले हामी कहाँ छौं ? भनेर हामीले आंकलन गर्नुपर्छ । हामीले नयाँ अरू केही गर्न पर्दैन, यसलाई संस्थागत, व्यवस्थित र उच्च प्रविधिका साथ कार्यक्रममा लान मात्र जरुरी छ । यसो गर्दा हामीले विदेशीको भर पर्नु पर्दैन । हामीले आफ्नो चिज बेच्न नसक्ने अर्काको आश गर्ने र विदेशी लगानी भित्राउ मात्र भन्ने गर्छौं । उनीहरूले लगानी लगाउने भनेको जुन चिज सहज रूपमा उपलब्ध छ, त्यसमा मात्र लगानी गर्छन् । त्यो त नेपालीहरूले पनि व्यवस्थित गर्दा पनि त हुन्थ्यो नि ? त्यो हुन सकेन त्यसमा हाम्रो चित्त दु:खेको हो ।
अहिले कति परिमाणमा जडीबुटी उत्खनन भएर विदेश निर्यात भइरहेको छ ?
नेपालको जडीबुटी स्वदेशमै यति न्यून उपयोग हुन्छ कि हिसाबै नगरौं । विदेशमा सतप्रतिशत जान्छ भन्दा नि हुन्छ । यो नियन्त्रणका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं । हामीले नागरिकलाई तालिम दिइरहेका छौं । उहाँहरूले नचिनेका कारणले पनि जडीबुटी विस्थापित हुन्छ । जस्तै, नेपालबाट पाँचऔंले एउटा पनि रोकिएको छैन । यहाँबाट त हात्तीजरा भनेर जान्छ, तर त्यो पाँचअाैले नै हुन्छ । सरकारले त्यसलाई अवैध पनि भनेको छ, तर त्यसको उत्खननमा नियन्त्रण गरेको छैन । नेपालमा भएको एक सय ६० बढी अर्किटमध्ये एक सय २२ वटा अर्किट नेपालमा रोकिएकै छैन । जब कि त्यो मृत–संजीवनी जस्तै छ । त्यो हामीले बुझेका छैनौं । जब हामी बुझ्छौं तबसम्म त त्यो जडीबुटी समाप्त भइरहेको हुनेछ । त्यतिबेला संरक्षण गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कागजीरूपले या एनजीओ/आइएनजीओको हिसाबले संरक्षणको नाटक त गरेका छन् । र, त्यो संरक्षण गर्ने होइन नाटक गर्ने मात्र हो ।
नेपालबाट कति प्रकारका जडीबुटी बाहिर जान्छन् ?
नेपालबाट कम्तीमा पनि सात सय २२ विविध प्रजातिका जडीबुटी बाहिर जान्छन् । विभिन्न दुर्लभ प्रजातिका पनि जान्छन् । जस्तै, सतुवा, चिरेत अलि कम जाने गरेका छन् । सायद उनीहरूले नै गर्न लागेका होलान् । तर सतुवा यस्तो चिज हो जुन १० औं वर्षपछि मात्र तयार हुन्छ । भ्याकुर वा कुट्कीे तयार हुन अझ बढि समय लाग्छ । यार्सागुम्बा त अब वर्षपछि जादैन होला । किनकि उनीहरूले आफैले जेनेटिक हिसाबमा मात्र कब्जा जमाएका छन् । जसरी अलैचीमाथि आक्रमण भयो, त्यसरी नै यर्सागुम्बामाथि पनि हुन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो जडीबुटीमा विशेषाधिकार लिनु पर्दथ्यो । हामीले जडीबुटीमा विशेषाधिकार लिएको भए यस्तो चोरी निकासी हुने थिएन । यसमा सबैको गिद्देनजर छ । सरकारको पनि त्यसमै गिद्देनजर छ । किनकिसरकारको त्यसमाथि एक थोता पनि चासो देखिदैन । सम्बन्धित विभाग उदासिन छ । यसले हाम्रा भावी पुस्तालाई दिने चिजको संरक्षण नगर्दा उनीहरूलाई दिने कुनै चिज बच्ने छैन । यसको संरक्षण गरिएन भने यो सबै अहिले नै नासिने छ । नभए अर्काको हातमा पुगिसक्ला । जस्तै, कालो हलेदो ८/९ प्रकारका हुन्छन् । यसको मुख्य लाखौ रुपैयामा हुन्छ । केही यस्ता दुर्लभ जडिबृटी छन्, जसले जुनसुकै रोगमा काम दिन्छ । यो एक लाल तौल सेवन गर्दा तत्काल असर गर्छ । यी चीजको संरक्षण खै ? यसको कुनै हिसाव किताब छैन । कुनै प्रकाशनमा देखिदैनन् । स–साना पुस्तिका मात्र यसबारे लेखिएको पाइन्छ । नेपालमा अर्को दुर्लभ जडिबुटी छ, यमपाते, जो तराईको जंगलमा पाइन्छ । यसको सानो ट्युमर मात्र सेवन गर्दा महिलाको सुकेको स्तन छ महिनामा फुकेर आउँछ । जसले कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन । नेपाल जडीबुटी प्रचूर मात्रामा पाइने देश हो । तर हामीहरू कस्तुरीले बीना खोजे जस्तै छौ । ग्रीन पार्टी नेपालले नेपालमा भएको वनस्पति व्यवस्थित गर्ने, तथ्यांक निकाल्ने, आम नागरिकको पहलबाट बनस्पति जोगाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ । जनताले जडीबुटी चिनेपछि यसको आफैं संरक्षण गर्छन । व्यवस्थित खेती प्रणाली शुरु हुन्छ । यसमै आधारित रहेर बजारीकरण गर्न सकिन्छ । विभिन्न कस्मेटिक, औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कुन कुन जडीबुटी छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्न कस्तो प्रावधान छ ?
तराईमा यति धेरै जडीबुटीहरू छन् कि त्यसको कुनै मूल्य तोक्न सकिदैन । तराईमा यार्सागुम्बाका पनि महायार्सागुम्बाहरू छन् । विदेशीले नेपालमा जे भेट्यो सबै लगिरहेका छन् । युरोपियन मुलुकहरूले नेपालमा मात्रै पाइने जडिबुटी लिइरहेका छन । सालपार्ने, बृष्यपर्ने जस्ता जडिबुटीको जति मूल्य तोके पनि हुन्छ । मूल्य त कामको हिसाबले तोकिन्छ नि । श्रमको हिसाबले मूल्य पाउने जस्तै यी जडिबुटीको पनि त्यस्तै हो कामको हिसाबले यसको मूल्य तोकिने हुन । बिहान उठेर दिनभरि नाच्ने र बेलुका ४ बजे सुत्ने वनस्पतिदेखि लिएर धेरै महत्त्वपूर्ण जडिबुटी तराईमा छन् । खनिजको खानी तराईमा छ । त्यस्तै चुरेमा उत्तिकै जडिबुटी पाइन्छ । यी सबैबारे हामीलाई थाहा छैन । हामीले तालिमको माध्यमबाट यसबारे जनतालाई सिकाउछौं । हिमाली क्षेत्रको त संसारभरि नै चर्चामा छ । मैले व्याख्या गर्नु परेन । मैले भन्न खोजेको रुख, पातदेखि जरासम्म सबै हिसाबले मत्त्वपूर्ण छन् । अहिले मासिदै गएका छन । सामुदायिक वन जडीबुटीको संरक्षणको हिसाबले मेरो नजरमा नेपालको घातक संस्था हो । किनभने यिनीहरूले रुख मात्र हेरिरहेका छन् । सालको रूख हेरेका छन्, तर त्यहाँ भएको महत्वपूर्ण झारबारे चासो राखेका छैनन् । वनमा खेती गर्न दिने, निजी प्रयोजनका लागि दिने गरिरहेका छन् । एक ठाउँमा त यस्तो देखियो कि सबै झारहरू हटाएर मकै छरेको थियो । यस्ता घातक संरचना र विचार कुनै पनि अप्राविधिक मान्छेबाट भएको अव्यवस्थित कार्यले नेपालको अर्बौं रुपैयाँ बाहिर जाने, तर १० रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको आवस्था छ । जुन चिज टिपे मात्र पुग्छ त्यो नास भइरहेको छ । अधिकांस सामुदायिक वन ज्ञान नभएका मानिसले चलाइरहेका छन् । जोसित ज्ञान छैन, उनीहरूले रुख र आर्थिक कुरा मात्रै हेरिरहेका छन् । भोलि पर्यावरणदेखि लिएर आर्थिक समृद्धि गर्ने विषयवस्तु अहिले नै समाप्त भइसकेका छन । त्यो विरुवा हुर्काउन बीसौं वर्ष लाग्छ, जो विरुवा सयौं वर्ष टिक्छ, त्यसको पात र फल टिपे मात्रै पुग्ने, तर अहिले अव्यवस्थित ढंगबाट दोहोन भइरहेको छ । कोदो रोप्न दिने सामुदायिक वनहरूलाई अहिले नै खारेज गर्नुपर्छ । यो ढंगले सामुदायिक वन चल्दैन । अहिले रुखको हिसाबले मात्र सामुदायिक वन राखेको देख्छौं । अहिलेका सामुदायिक वनमा फडानी मात्रै भइरहेको छ । वनमा रूखमुनी रहेको फडानीले ती जडिबुटीका बुटाहरू मर्छन् । ती वनस्पति रुखकै झाडको आडमा बाँचिरहेका हुन्छ । त्यो झाड नष्ट भयो भने जडिबुटी रहँदैन । त्यसैले साना पोथ्रा हुर्काउन वनफडानी रोक्नुपर्छ । यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । समुदायले पनि वनको जिम्मा लिँदा हुन्छ, तर समुदायले उद्यमी तरिकाले जिम्मा लिनुपर्छ र त्यहाँ भएको झाडीलाई नष्ट गर्ने नभई भर्जिन छोड्नुपर्छ । वर्षदिनमा फल्ने र पात टिपे पलाउने चिज छन् त्यसको फल मात्र प्रयोग गर्ने, मुना पलाउने चिजको पात मात्र प्रयोग गर्ने त्यसलाई पूर्णरूपमा नष्ट नगर्ने, रुखै बेच्ने, क्युविक फिटको यति, वार्षिक नाफा यति, सामुदायिक वनले स्कूल बनाउने, निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने, केही बाटो खन्ने त्यस्तो सामुदायिक वनले कहाँ हुन्छ ? त्यो त राज्यको काम हो । यो सामुदायिक सम्भावना बाहिरको काम हो । यो अप्राविधिक मान्छेले गर्दा यस्तो काम भइरहेको छ ।
विदेशमा जडिबुटी धेरै गएको छ भन्नुभयो, आम्दानी कस्तो भइरहेको छ ?
आम्दानी जसले गर्‍यो त्यसको मात्र हो । संकलन गर्नेलाई आम्दानी छैन । दुई/चार हजार जना संकलन गर्नेहरू छन्, उनीहरूको आर्थिक स्थिति उकासिएको छैन । किनकि संकलन गर्नेले सस्तो भाउमा बेचिरहेको छ, व्यापारीले त्यही सामान लाखौ रुपैयामा बिक्री गरिरहेको छ ।
अहिले तराईबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारतमा गइरहेको छ, नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्छ ?
क्रसर उद्योगका नाममा विभिन्न खजिन पदार्थ रसमणिक क्र्वाज, सिलिक्याटहरू आदि चिज गएका छन् । जुन गइसकेपछि दशौं हजार, बीसौं हजार वर्षसम्म पनि ती चिज हामीले फेरि प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यो मुलुकको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । आर्थिक रूपमा त केही पनि भएको छैन । तर यी चिज कहिल्यै प्राप्त गर्न सकिदैन, जुन औषधि गुण भएका चिजहरू छन् । ढुंगामा पनि अभ्रकका ट्रकका ट्रक गइरहेका छन् । अभ्रक भषमुखबाट लाखौं खरोडौंको ज्यान बच्न सक्छ । अब भषमुख प्रकृतिबाट नेपाल जानुपर्छ । त्यसैले यो पार्टीले अहिले जनताले जुनसुकै पार्टीमा जाउन कुनै मतलब राख्दैन, तर यस्तो अज्ञानता, अव्यवस्थित जीवन जिउन उपयुक्त होइन । सीप सिक्नु र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्नु महत्त्वपूर्ण हो । धेरै खर्च गरेर विदेश गएको नेपाली त्यहाँ पनि राम्रो परिश्रमिक पाउँदैन । त्यहाँबाट फर्किएर नेपाल आउँदा यहाँको मूल्य पनि कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । उनीहरूले फर्केर पनि केही किन्न पाउँदैनन् । घर लथालिङ भइसकेको हुन्छ । नेपालीहरू श्रमका लागि लडिरहेका छन् । त्यसैले तिनलाई सीप सिकाएर यहीको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर सानातिना उद्यमी बनाउने, हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।
यहाँ आयुर्वेदतिर काम गर्नेको पनि एउटा निर्देशिका बनायो, तर त्यो निर्देशिका अवैज्ञानिक बन्यो । अहिले चीनले १८ लाख मानिसलाई आयुर्वेदको तालिम दिएर गाउँगाउँमा खटाएको छ । आहारविहारमा ध्यान देऊ, स्वस्थ रहन यस्तो गर उस्तो गर, भनेर खटाएको छ । जबकि उनीहरू पाश्चात्य औषधिबाट बाहिर निस्किदैछौं भनिरहेका छन् । उनीहरू अहिले ८५ प्रतिशत बढी आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गरिरहेको दावी गरिरहेका छन् । विश्वका सबै देश आयुर्वेदिकको प्रयोगतिर लाग्ने, तर हामीभित्र रहेको विज्ञानलाई अव्यवस्थित गर्दै छोड्दै जाने, हाम्रा वैज्ञानिक पुस्तकलाई विस्थापित गर्दै जाने, तर हुँदै नभएको विज्ञानलाई समात्दै जाने हो भने कहाँ पुग्ने हो ? यो यात्राले चुनावमा विरोधको कालो झण्डा उठाउने, त्यसपछि टायर बाल्ने, त्यसपछि पासपोर्ट लिएर विदेशतिर लाग्ने । अहिले पार्टीमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान जिरो प्रतिशत छ । किनकि, एउटा टायर बाल्ने ठाउँबाट दुई किलोमिटर वरिपरिका बालबालिकालाई ब्लड क्यान्सर हुन्छ । मानिसलाई फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ । त्यसबाट डाइएक्जिन ग्यास उत्पादन हुन्छ, जुन बोसोमा बस्छ । र, विस्तारै हामीलाई मुटुको रोग लाग्छ । टायर बालेर अर्बौंको क्षति हुन्छ । महिलामा पनि क्यान्सर हुन्छ । दुई अढाई महिनाका बच्चामा ब्लड क्यान्सर हुन्छ । यस्तो पापी काम उनीहरूले किन गरिराखेका छन्, ज्ञान नभएर । यसको बारे अरु पार्टीले ग्रीन पार्टीसँग तालिम लिएमा राम्रो हुन्छ । किनकि हामी स्वास्थ्यका लागि लडिरहेका छौं ।
चुरेबाट आएको ढुंगा कति प्रकारका छन् ?
हामी नेपालीले अहिले ८१ प्रजातिका ढुंगा मात्र चिन्छौं । जडिबुटीमा पुगनपुग पाँच हजारको आँकलन गरेको छु मैले । जंगलमा अरू धेरै नयाँ प्रजाति भेटिन्छन् । यी सबै ८१ प्रजातिका ढुंगा स्वास्थ्य मै काम लाग्ने हुन्छ । स्फटिक, कालो निलम, निलो निलम देखिएको छ, यसको त नेपालमा पहाडै पहाड छन् । यी त मैले चिनेका हुन् । म अझै कति ठाउँमा पुग्दा नयाँनयाँ ढुंगा भेट्छु, जुन मैले चिनेको छैन । यस्ता मैले नचिनेका ढुंगा कति पो होलान ?
ग्रीन पार्टीको केही सन्देश छ ?
हामीले स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य बरबाद भयो भने केही पनि प्राप्त गर्न सकिदैन । ऋषिमुनीहरूले भन्नुभएको छ– ‘समय पनि छ, सबै कुरा जोगाउन पनि सक्थ्यो, स्वास्थ्य पनि छ । आर्थिक समृद्धिका काम पनि गर्न सक्थ्यो भने ती सबै कुराबाट बाहिरियो भनेपछि बुढेसकालमा के गर्न सक्छौं, र ?’ नेपालको पनि अहिलेका स्रोत र साधन जोगाउन सकिएन भने अहिले मल्टिनेशनल कम्पनीहरू आइराखेका छन् । छिकेमी देशहरू त दोहन गर्नेमा प्रमुख छन् । यी सबैलाई ध्यानमा राखेर आफू छिटोभन्दा छिटो प्राविधिकरूपमा अगाडि बढ्ने, ज्ञान लिने, तालिम लिने, सीप सिक्ने र अगाडि बढ्ने कुरा गरिएन भने अब विस्तारै वस्तु सिद्धिएपछि पछुतो गर्नुको काम छैन । जस्तै सिक्किमेली जनताले अहिले राष्ट्रियता बुझे पनि उनीहरूसँग राष्ट्र छैन । प्यालेष्टाइनीले राज्य बुझे होलान्, उनीसंग शान्तिसँग बाँच्ने अवस्था छैन । इरानको राजाले एक चोटी के भन्नुभयो भने ‘जतिखेर म इरानमा थिए, मैले त्यतिबेला इरानलाई बुझ्न सकिन् । अहिले इरानलाई अत्यन्तै राम्रोसँग बुझेको छु, तर म अहिले इरानमा छैन ।’ यसको अर्थ के भने जुन उमेर, अवस्थाले सब सिद्धिएपछि फेरि प्राप्त गर्न सकिदैन । त्यस कारण आम नागरिकहरूलाई ग्रीन पार्टी मै लाग्नुस् यो कुरा होइन्, जहाँ लागे पनि हुन्छ, आफ्नो मत जहाँ प्रयोग गरे पनि हुन्छ । तर स्रोत साधनलाई उच्च परिचालन गरेर नेपाल मै बस्ने, नेपाल मै गर्ने र विदेशीको पुच्छर बनेर नहिडे राम्रो । सर्टिफिकेटको फोटोकपि गर्दै, जे पायो त्यही शिक्षा र नेताको पछि लाग्ने बानी बन्द गरेर सीप सिकेर उन्मुख हुनुभयो भने सबैभन्दा ठूलो परिणाम, सबैभन्दा ठूलो वैज्ञानिक विचारको प्रारम्भ भएको मैले ठान्छु । त्यसैले ग्रीन पार्टीले सबै नागरिक विदेशीनु भन्दा सीप सिकेर स्वदेशमा भएको चिजलाई परिचालन गर्न आतुर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिन्छु ।
चैत २३ गते (epaper)